Fikradda naqshadaynta ee 24 ee bisha ugu fiican ee loogu talagalay ragga iyo dumarka - Fikradaha farshaxanka
Moon tattoo macnaha
Tattoo moon wuxuu noqday mid caan ah oo caan ka ah sababtoo ah waxa ay mataleyso. Qaar badan oo ka mid ah dadka ku dhejiya waxay aaminsan yihiin in ay saameyn ku yeelato awoodda sarraysa iyo sidoo kale asal ahaan, waxay muujinaysaa taariikhda iyo sayniska. Dadka isticmaala tattoo-ka noocan maaha mid xiiso u leh macnaha kor ku xusan sababtoo ah tattoo #moon waxay leedahay macno badan. Tirada macnaha mugdiga ayaa ah waxa ka dhigaya mid aan caadi ahayn. Waxaa lagu dhejin karaa sawirro kale si ay kuugu siiyaan macnaha waxtarka leh. Qaar ka mid ah macnaha mugdiga ayaa noqon kara sixir. Kuwa rumeeysan sixirku waxay ku dhejin karaan # xitaa qayb kasta oo kamid ah jirkooda. Dabeecadda ba'an ee dayaxa waa wax dadka ka dhigaya inay ku dhejiyaan jidhkooda inta ay yihiin kuwa iyagu sheegay in ay matalayaan cibaadada iyo cibaadada.
Dayaxa wuxuu kaloo macne u lahaan karaa sharaxaadda haweeneyda. Dayaxa wuxuu muujin karaa hal-abuurka iyo kuwa raadinaya bacriminta, waa qalab fiican. Dayaxa sidoo kale wuxuu u taagan yahay korniinka, miskiinka, xusuusta kuwa aad lobeahay, tiro yar, caqiidada Wicalka, sii-deynta tamarta iyo dhinacyada mugdiga ah. Tattoo moon waxaa laga arki karaa shay kale si loo siiyo macnaha gaarka ah.
Tattoo moon waa nooca is-muujinta, laakiin shakhsiyaadka doorta in ay qaataan tattoo dayax-gacmeedka ama jirka waa in loo tagaa xafiiska la oggol yahay oo ay fursad u siiyaan inay ka hadlaan hababka caa fi maadka leh ee xirfadlayaasha ka shaqeeya dukaanka ama tattoo moon qolka. via
Midab Tigroo ah
Nasiib wanaag, tattoos-moon iyo boobka ayaa ka ammaan badan wakhtiyada kale, ka hor intaanad u soo jiidin ganacsade wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in shaqadaada la qabto. Xirfadlayaasha jirka ayaa lagu tiirsanaa si ay u qabtaan si dhakhso ah si ay u noqdaan habab wanaagsan. via
Adigoo isticmaalaya habka fayo-qabka, habka taatuuga iyo tufaaxa jirka ayaa iska ilaaliya naftooda iyo macaamiishooda laga bilaabo baaxada infakshanka iyo jeermisyada keeni kara cudurka. via
Maxaa loola jeedaa in la helo tattoo dayaxa sidan oo kale? Sanado badan, waxaynu aragnay boqolaal qof oo isticmaalaya tattoo dayaxa si ay u qurxiyaan jirkooda. Qof kastaa wuxuu leeyahay aragtidiisa gaarka ah ee aragtida tattoo moon. via
Garoonka Dayaxa Tattoo
Qaar ka mid ah dadku waxay jecel yihiin halka qaarkood aysan sameynin, waana wax xaqiiq ah oo ku saleysan sababaha aan shaah aheyn. Tobanaan sano ka hor, noocaas oo ah qaab-dhismeedka jidhka ayaa lagu qaddariyay dadweynaha guud, iyo shakhsiyaadka runtii ka dhigay waxa loo arkaa inay yihiin kacaan. via
Star iyo Moon Tattoo
Waxaad ujirtay tallaabo qurxoon oo aad u sameysatid wax aad u jilicsan oo ah tattoo dayaxaaga ah. Waqtigan xaadirka ah waa fursad weyn oo aad ku heli kartid riwaayad sharci ah iyo farshaxan oo isbeddelaya shaqadaada farshaxankaaga maqaarka. via
Degmooyinka iyo degmooyinka qaarkood waxay xakameynayaan studio tattoo iyo riwaayadaha. Si kastaba ha noqotee, si joogta ah, tattoos-moon ayaa lagu sameeyaa kijada iyo xuduudaha, tan iyo taatuulka tattoo waa mid raqiis ah oo fudud in la helo. via
Qaadashada mashiinka dayaxa ee mashiinka aan raali ka ahayn iyo kuwa takhasuska leh oo aan la taaban karin ayaa ku dhejin kara adiga, iyo kuwa farsamada, halis walbaa oo wax u dhimaya xanuunka aan la adkeyn karin, tusaale ahaan, cagaarshow ama maqaarka caabuqa ee abuuray shimbiro microscopic ah. via
Waxaan ku dhiirri-galinaynaa taatu-taariiqda bisha inay helaan shaqadooda. Hel xafiiska xafiis oo buluug ah oo dalbana booqasho - dukaanka waa inuu noqdaa mid aan fiicnayn oo nadiif ah. Iskuday inaadan xishoonin inaad kala sheekaysato khabiirada ku saabsan farsamooyinka amniga. via
Duufaan Tunxi Moon
Sawirada macmacaanka oo dhan
Dhammaan adduunka oo dhan, dadku waxay u yimaadeen inay qaataan quruxda iyo farriinta in bisha laga bilaabo tattoos loo isticmaali karo. il image
Tartanka mugdiga ah
Qaado tusaale ahaan, sidee u dareemeysaa inaad bilawga sidan u jilcan tahay? Tani waa hal taatuwan oo bilaash ah kaas oo noqday isbeddel sannadihii la soo dhaafay. Inta badan annaga ayaa noogu mahadnaqay shaqooyinka farshaxan ee cajiibka ah ee aan ku dhajinnay qaybo kala duwan oo jirkeena ah in ay inoo xusuusiyaan xaadirka, taariikhda iyo xitaa mustaqbalka. il image
Farshaxanka tattoo wuxuu noqday mid ka mid ah qaabka farshaxanka ugu da'da weyn ee lagu fekeray bini-aadanka. Farshaxanku wuxuu noqday nooc ka mid ah ficil ahaan ama ficil is khilaafsan oo ku xiran waxa loo isticmaalo. Waxaa sidoo kale jira dadka isticmaala tattoo sida qaab quruxsan. il image
Qurxinta tattoo dayaxu waxay noqon kartaa mid la aqbali karo oo keliya marka ay kuusoo duubeyso khadkaaga. Qayb ka mid ah jirka aad u baahan tahay tattoo dayaxa wax badan. Tani waa sababta oo ah inaad ku dhuumato ama aad u soo bandhigto aduunka si aad u aragto. il image
Inta badan tattoos dayaxa oo la yaab leh
Tattoo dayaxa qurxinta
Waa maxay waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso ka hor intaadan helin tattoo dayaxa? Waa inaad taqaanid nooca tattoo ee aad u baahan tahay ka dibna waa inaad fahamtaa waxa tattoo uu ka hadlayo. il image
Marka aad taas la sameyso, waa inaad raadisaa xirfadle kaas oo kaa caawin doona inaad ku guulaysato foomka farshaxanka. il image
Waxaa jira meelo badan oo aad heli kartid caawimaad marka ay timaado doorashada doofaarka tattoo. Internetku wuxuu leeyahay websiyo badan oo ku takhasusay wax ka qabashada noocyada kala duwan ee shaati-galada. il image
Markaad awooddo inaad wax ka akhrido boggaan internetka oo aad weydiiso su'aalo xasaasi ah oo ku saabsan tattoo gaar ah, waxay kuu fududaan doontaa inaad hesho tattoo dayaxaaga. il image
Halkan riix halkan si aad u heshid bilo badan Tattoos
sawirrada raggasawir gacmeedtattoos gacantatattoo maroodigaTilmaamta jaalaha ahtattoos taajkiiTattoo Featherlaabto laabtaJoomatari Tattooswaxaa la dhajiyay tattooshenna tattoowaxay jecel yihiin tattoostattoo biyo ahmuusikada muusikadaDhaqdhaqaaqatattoo tilmaanTattoo infinitygadaal u laabotattoos qosol lehsawirada gabdhahashaatiinka shiidangaraacista gacmahacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahlibto libaaxtattoo dheemanshimbir shimbirtattoos eaglejimicsiga bisadahatattoo ah octopussawirada malaa'igtatattoos moonnaqshadeynta mehnditattoos iskutallaabtatattoos cagtaarrow Tattootattoos saaxiib saxa ahtattoos qoortaku dhaji tattoostattoos sleevetattoostattoos qabaa'ilkatattoos qorraxdafikradaha tattookoi kalluunkatattoos ubaxlammaanahaTattoos Wadnahatattoo indhahataraagada kubbaddaTartoo ubax badan